Imbali yeTekhnoloji eSiphazamisayo kwiNtengiso | Martech Zone
Njengoko iindlela zonxibelelwano ziguqukile kwaye ubuchwepheshe obutsha buye baqulunqwa, baye bawa phantsi amashishini amaninzi kwaye kwavela amatsha amatsha ukuwabuyisela. Le infographic, iphuhliswe kubambiswano phakathi Eloqua kwaye Yess3, Usihamba ngembali kunye neziganeko ezininzi ezibangele utshintsho kubathengisi.
Imbali yoTshintsho oluPhazamisayo kwiNtengiso ye-B2B ijonge kubuchwephesha bokuphumelela kunye neenkqubo ezitshintshe ngonaphakade icandelo elinye lehlabathi: ubomi beengcali zentengiso zeB2B.
Ukujongwa kwakhona kwembali kuyathandeka kushishino lwethu… ngakumbi kuba inqanaba lotshintsho lubonakala ngathi luyanda kunokuba lwehle. Jonga ezi ezinye izinto apho sihlola khona imbali: Imbali yokuHlaziywa kweWebhu, Imbali yeNtengiso, Imbali ye-imeyile, Imbali yemiyalezo ebhaliweyo, kwaye i Imbali yeefowuni eziphathwayo.
tags: imbaliImbali yentengisoImbali yetekhnolojikwi-infographicezintshaItekhnoloji yentengiso
NgoJanuwari 17, 2012 ngo-12:27 PM
Le yi "infographic" eqhwalelayo. Ayiyotafile, kwaye ihlala inabantu abaninzi ngezinto ezingahambelani kude nesihloko esithi "Imbali yoTshintsho oluphazamisayo kwiNtengiso yeB2B". Ukuba mtsha akwenzi into “iphazamise”. Kwaye akukho nakuphi na ukukhanya okanye ukuqonda kwinto eyenza into entsha iphazamise ukuthengiswa kwe-b2b.
I-IBM PC, umzekelo, yayiphazamisa ngokuqinisekileyo. Kodwa oko kwakuqhutywa yimfuneko yamandla ekhompyutheni ayefikeleleka ngakumbi kubantu abaninzi kunye nokusetyenziswa ngokukodwa kweespredishithi, ezazisekuqaleni kwe-80s yayiyi-accounting phenomenon, kungekhona enye yokuthengisa. Yayiphazamisa kuba yayiluncedo, inexabiso eliphantsi, ifikeleleka ngakumbi (isasazwe kakhulu), ukuba inamandla angaphantsi kwaye ayinabuchule kune (okt ingaphantsi) koko kwafika ngaphambili. Yayisekwe kulwakhiwo oluvulekileyo luchasene nobunini. Ukusetyenzwa kwamagama kunye nesoftware yokubonisa kwiiPC ayizange ibaluleke kwade kwadlula ixesha elide, ngelo xesha ukuphazamiseka besele kwenzekile, kwaye kuyaphikiswana ukuba akukho nanye kwezi “yayiluphazamiso lwentengiso”, kwaye ngokuqinisekileyo ibingeyiyo “inguqulelo ye-b2b yokuthengisa”.
Oku kundibetha kakhulu kunye ne-hype - ndizama ukubambelela kwigama eliye lisiba nentsingiselo, kwaye emva koko ngokukhululekileyo ndibhekiselele kukubaluleka kwalo kwaye ngaphandle kokujonga intsingiselo yalo. Ngenene bendilindele ukuba oku kubonelele ngendlela itekhnoloji eyahlukileyo etshintshe ngayo okanye eyandisiweyo yokuthengisa, inciphisa iindleko zayo kunye nokwandisa ukusebenza kwayo, kwaye kutheni utshintsho ngokwenene beluphazamisa (kwaye ke lungenakuguqulwa). Konke okwenzileyo apha kukubonelela ngohlobo lwexesha lokwenziwa kwezinto ezintsha ezicacileyo ngaphandle komxholo, kunye nemoto ye-Eloqua ukuba izazise kwaye ibange ukuba iyaphazamisa (engeyiyo).